This copy of window is not genuine ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
This copy of window is not genuine ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း
Saturday, March 17, 2012 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်7comments
မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာကို Virus ကြောင့်ဖြစ်စေ Error တခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ အခြားသော အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြေရှင်းမရတဲ့ အဆုံး Window ပြန်တင်တတ်ကြတာ လူတိုင်းပါပဲ...။
ဒီလို ဝင်းဒိုး ပြန်တင်လိုက်တာ သိပ်အခတ်အခဲ မရှိပေမဲ့ အပေါ်ကပုံထဲကလို နောက်ခံ အမည်းရောင်ကြီးနဲ့ This copy of window is not genuine ဆိုတဲ့ လိုင်စင် ဗားရှင်း မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး
Activation Key တောင်းနေတဲ့ ပြဿနာက ဒုက္ခပါ ။
အဲဒီပြဿနာကို တခါတလေမှာ Loader လေးတခုခုကို Run ပေးလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာမျိုးရှိသလို ရှိသမျှ Loader တွေ အကုန်လုံး Run ပေးလဲ ဘယ် Loader နဲ့မှ ဖြေရှင်း မရနိုင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်..။(ကျနော့ လက်တွေ့ပါ) ... ဒီမှာ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး လေ့လာနေကြတဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်ယောက်များ... ဒီလိုပြဿနာမျိုး ကြုံလာခဲ့ရင် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။ အသုံးပြုပုံ အရမ်းရိုးရှင်း တဲ့အတွက် ထပ်ရှင်းမပြလိုက်တော့ပါဘူး..:D
Download Link Update (19 August 2013)
Download RemoveWAT v2.2.6
Download tool RemoveWAT v2.2.5.6
Open The RemoveWAT
Click RemoveWAT to start the process.
အပေါ်က RemoveWAT ကို Run ပြီးရင် ဒီအောက်မှာ တင်ပေးလိုက်တဲ့ Loader လေးကို ဒေါင်းယူပြီး Run ပါ.... ကျန်တာ သူ့ဘာသာသူ အလုပ် လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်...။
Download Loader 2.2.1
Posted in: window7Activator
19 March 2012 at 04:26 Reply
အကိုရေ...ကျွန်တော်က၀င်းကမ္ဘာကျော်ရဲ့ပရိတ်သတ်၁ယောက်ပါ။This copy of window is not genuine ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ပက်သက်ပြီးပြောချင်တာကတော့၂ခုလုံးအလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ။Download RemoveWAT v2.2.5.2ကိုဒေါင်းလော့ချပြီးrun လိုက်တော့ (The application failed to initialize properly (0*c0000135).Click on OK to terminate the application ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်ဗျ။
Download Loader 1.6 ကိုRum လိုက်ပြန်တော့Malware သတိပေးတဲ့ဟာကြီးတက်တက်လာပြန်ရောဗျ။
19 March 2012 at 23:12 Reply
Loader 1.6 ကိုပဲ Run ပေးပါ Antivirus ကို ခဏ ပိတ်ပေးထားပါ သူက Virus မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်လဲ ဒီ ဆော့ဝဲ တွေနဲ့ အဆင်ပြေခဲ့တာပါ ...
20 March 2012 at 07:54 Reply
ကျေးဇူးပဲဗျာ ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ ကြာပြီး ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းတောင် မသိဘူး အခု မှနည်းလေးသိသွားပြီး ကျေးဇူး တင်တယ်ဗျာ
17 June 2012 at 18:28 Reply
I am Win Soe from Mandalay.I am keen interest in IT though I havealack of IT knowledge.I frequently done one click recovery of my computer.(Lenovo P 6200) & always get genuine problem.Now I solved it with Your remove WAT software.After run software and restart,my genuine problem was correct.
I want to know may I need run loader1.6?
17 June 2012 at 20:41 Reply
genuine မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Loader တခုခု နဲ့ Run ပေးရဦးမှာပါ...window က genuine ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ မလိုတော့ပါဘူး ... ကျနော့ အတွေ့အကြုံရ ဆိုရင်တော့ နှစ်ခုစလုံး Run ပေးမှ အဆင်ပြေတာပါ....:)
17 June 2012 at 21:22 Reply
My laptop is still OK with only with Your remove WAT software.Thanksalot Ko Win.
ချူ တစ် တစ် says:
15 May 2014 at 21:10 Reply
ကျေးဇူးးပါ အစ်ကိုအပေါ်ကနည်းလမ်းအတိုင်းဖြေရှင်းလိုက်တာအဆင်ပြေသွားပါတယ် အစဉ်လေးစားလျှက်ပါ